Usoro na ọnọdụ | Radị Rave
Ebe nrụọrụ Weebụ na Ntanetị Ngwa & Ọnọdụ ojiji
Ojiji nke web Rave gị ma ọ bụ ngwa enyere gị aka nke Style Rave ma ọ bụ otu n'ime ndị enyemaka ya, yana ọdịnaya, njirimara ma ọ bụ arụmọrụ emere site na ma ọ bụ site na websaịtị a, gụnyere ụdị subdomains ya, ma ọ bụ ngwa ("Ihe Weebụsaịtị ahụ") A na-achịkwa usoro ndị a na ọnọdụ ndị a. Emebere www.stylerave.com site na Style Rave ma ọ bụ ndị enyemaka ya ("anyị" ma ọ bụ "anyị" ma ọ bụ "anyị"), nke ọ bụla anakwerewo Usoro na Ọnọdụ ndị metụtara websaịtị ya. Anyị nwere ike ịgbanwe Usoro na Ọnọdụ site n'oge ruo n'oge, n'oge ọ bụla na-enweghị ọkwa, gị site na biputere mgbanwe ndị ahụ na weebụsaịtị. Site n'iji STYLERAVE.COM, YOU NA-AKW ANDKWỌKWỌKW ANDKWỌKWỌKWERKWỌKW ANDKWỌKWỌKWỌKWỌKWỌKWỌKWỌKWỌKWỌKWỌ NSO Ọ bụrụ na ikwenyeghi na Usoro na ọnọdụ a, ị nwere ike ịnweta ma ọ bụ jiri ụzọ www.stylerave.com.
Dịka n’etiti anyị na anyị, akụrụngwa ma ọ bụ ọdịnaya niile enwetara na saịtị a bụ naanị site na Style Rave ma ọ bụ otu nke nyere ọdịnaya nke Style Rave na-ejigide ikike, aha na mmasị niile dị na ọdịnaya. Ojiji nke www.stylerave.com anaghị enye gị ikike inwe ọdịnaya, koodu, data ma ọ bụ ihe ị nwere ike ịnweta na www.stylerave.com. Dika odi, Agaghi edetu ihe omuma a, kesaa, rekuta ya, bugoo ya, tinye ya ma obu bufee ya n'uzo n’enweghi nkwenye edere edere nke Style Rave. N'ime ime nke a, ịgaghị ewepu ma ọ bụ gbanwee, ma ọ bụ mee ka ewepu ya ma ọ bụ gbanwee, nwebisiinka ọ bụla, ụghalaahịa, aha ahia, akara ọrụ, ma ọ bụ ọkwa ọ bụla ọzọ na-egosi na ọdịnaya ọ bụla. Mmegharị ma ọ bụ iji nke ọdịnaya ewepụtara dị ka esi gosipụta ya na Usoro ojiji ndị a na-emebi Style Rave ma amachibidoro ndị ọzọ dabara na ngosipụta nwebisiinka, nke bụ akụkụ nke usoro na ọnọdụ ndị a.
Nwere ike ịbanye ma lelee ọdịnaya ahụ na www.stylerave.com na kọmputa gị ma ọ bụ na ngwaọrụ ọzọ na, belụsọ na egosipụtara na Usoro na Ọnọdụ ndị a ma ọ bụ na www.stylerave.com, mee otu mbipụta ma ọ bụ Mbipụta nke ọdịnaya ahụ na www.stylerave. com maka nkeonwe gị, ihe ị na-eji eme naanị. Ọ gwụla ma akọwapụtara nke ọma na Usoro na ọnọdụ ndị a ma ọ bụ na www.stylerave.com, ojiji nke www.stylerave.com yana ọrụ enyere na ma ọ bụ na www.stylerave.com, bụ maka onwe ya yana ebughi nzube azụmahịa.
Ọ gwụla ma akọwapụtara nke ọma na Usoro na ọnọdụ ndị a ma ọ bụ www.stylerave.com, nkesa azụmahịa ma ọ bụ nkwalite, mbipụta ma ọ bụ nrigbu nke www.stylerave.com, ma ọ bụ ọdịnaya ọ bụla, koodu, data ma ọ bụ ihe na www.stylerave.com, bụ Amachibidoro ị gwụla ma ịnwetere ikike ederede edere site na ndị ọrụ anyị enyere aka ma ọ bụ ihe njide ikike ọzọ nwere ike ịdị. Ndị ọzọ karịa ka enyere gị aka na ebe a ma ọ bụ na www.stylerave.com, ịnwere ike ibudata, biputere, gosipụta, bipụta, nwepụta, kesaa, kesaa, nyefee, gbanwee, kesaa, kesaa, mepụta ọrụ ndị sitere na, ire ma ọ bụ ghara irigbu. ọdịnaya ọ bụla, koodu, data ma ọ bụ ihe dị ma ọ bụ dị na www.stylerave.com. Na mgbakwunye, ị kwenyere na ị gaghị agbanwe, dezie, wepụ, wepu, ma ọ bụghị gbanwee ihe ọ pụtara ma ọ bụ ọdịdị nke, ma ọ bụ iweghachi, ọdịnaya ọ bụla, koodu, data, ma ọ bụ ihe ndị ọzọ na ma ọ bụ site na www.stylerave.com, gụnyere , na enweghị mmachi, ngbanwe ma ọ bụ iwepụ akara ụghalaahịa ọ bụla, aha ụghalaahịa, akara ngosi, akara ọrụ, ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ gbasara ikike ma ọ bụ ọkwa ikike iche. Acknowledge kwenyere na ịnwetaghị ikike ikikere ọ bụla site na nbudata ma ọ bụ jiri ngwa nwebiisinka ọ bụla na site na www.stylerave.com. Ọ bụrụ na iji ojiji nke www.stylerave.com, ma ọ bụ ọdịnaya ahụ, koodu, data ma ọ bụ ihe dị na ya ma ọ bụ site na www.stylerave.com, ewezuga nke enyere n'elu, ị nwere ike mebi iwu nwebiisinka yana iwu ndị ọzọ na United States. obodo, yana applicablenwe ogbe steeti nwere mmetuta ma enwere ike ịdakwasi iwu maka ojiji a na-akwadoghị ya.
Akara ahia ahia.
Akara ụghalaahịa, akara ngosi, akara ọrụ na aha azụmaahịa (mkpokọta “Akaramaahịa”) gosipụtara na www.stylerave.com ma ọ bụ ọdịnaya dị site na www.stylerave.com bụ ụghalaahia edenyere edebanye aha na ndị ọzọ na enwere ike ghara iji ya na njikọ ahụ ngwaahịa na / ma ọ bụ ọrụ ejikọghị ya, jikọtara ya, ma ọ bụ nkwado ya site n'aka ndị na-ejide ikike ya nwere ike ibute ọgba aghara ndị ahịa, ma ọ bụ n'ụzọ ọ bụla na-akparị ma ọ bụ na-eme ka ndị nwe ikike ha. All ụghalaahia abụghị nke anyị nke na-egosi na www.stylerave.com ma ọ bụ na ma ọ bụ site na ọrụ mkpokọta, ọ bụrụ na ọ dị, bụ ihe ndị nwe ha. Onweghi ihe dị nawww.stylerave.com ekwesịrị ịdo dị ka inye, site na ntinye, estoppel, ma ọ bụ ihe ọzọ, ikike ọ bụla ma ọ bụ ikike iji akara azụmaahịa ọ bụla gosipụtara na www.stylerave.com na-enweghị ikike edere ede ma ọ bụ ndị ọzọ nwere ike ịnweta Trademark dị adị . Amachibidoro iji akara ụghalaahịa nke gosipụtara na www.stylerave.com ma ọ bụ na ma ọ bụ site na ọrụ saịtị ọ bụla.
Ozi onye ọrụ.
Mgbe ị na-eji www.stylerave.com na / ma ọ bụ ọrụ enyere na www.stylerave.com ma ọ bụ na www.stylerave.com, enwere ike ịgwa gị ka ịnye anyị ozi ahaziri iche (nke anyị kwuru maka nke a dị ka “Ozi Onye Ọrụ” ). Edebere ozi anyị na usoro ojiji anyị n'ihe banyere nzuzo nke Ozi Ọrụ Onye Ọrụ ahụ ka edoziri na weebụsaịtị amụma nzuzo nke ejikọtara n’ime ya site na ntụnyere maka ebumnuche niile. Kwenyere ma kwenye na ị nanị na-ahụ maka ịdịmma na ọdịnaya nke Ozi Onye Ọrụ.
Ọ gwụla ma arịọghị anyị arịrịọ, anyị anaghị arịọ arịrịọ ma ọ bụ na anyị achọghị ịnata ozi nzuzo ọ bụla, nke nzuzo ma ọ bụ nke ọzọ site n'aka gị site na www.stylerave.com site na e-mail ma ọ bụ n'ụzọ ọ bụla. Ozi ọ bụla, ọrụ okike, ngosipụta, echiche, aro, echiche, ụzọ, sistemụ, atụmatụ, atụmatụ, usoro ma ọ bụ ihe ndị ọzọ nyefere anyị ma ọ bụ zitere anyị (gụnyere, dịka ọmụmaatụ na enweghị mmachi, nke ị nyefere ma ọ bụ zigara ụlọ anyị na-akparịta ụka. , bọọdụ ozi, nzaghachi nyocha, na / ma ọ bụ blọọgụ anyị, ma ọ bụ zitere anyị site na ozi-e) (“Ihe ndị edobere”) na-agaghị eche na nzuzo ma ọ bụ nzuzo, anyị nwekwara ike iji ya n'ụzọ ọ bụla kwekọrọ na weebụsaịtị amụma nzuzo. Site na iweghachi ma ọ bụ ziga anyị Ihe Ndị E nyefere n'okpuru, anyị: (i) nọchitere anya ma nye ikike na ihe achọrọ nyefere gị n'aka gị, na ọ nweghị ndị ọzọ nwere ikike ọ bụla, yana “ikike ikike” ọ bụla etinyegobeghị ya, na (ii) ị nyere anyị na ndị anyị na ha na-arụ ọrụ ikike eze, na-anaghị achịkwa achịkwa, ụwa niile, ebighi ebi, nwegasịrị, na-enweghị ikike na nyefee ọ bụla, ikike inye ikike na ikike iji ya, i copyomi, imepụtagharị, gbanwee, megharịa, bipụta, sụgharịa, ike ọrụ sitere na, kesaa, rụọ ọrụ, gosipụta ma tinye ọrụ ndị ọzọ arụpụtara ihe ọ bụla (usoro dum ma ọ bụ akụkụ) n'ụdị ọ bụla, mgbasa ozi, ma ọ bụ teknụzụ mara ugbu a ma ọ bụ emesịa etolite, gụnyere maka nkwado na / ma ọ bụ nzube azụmahịa. Anyị enweghị ike ịnwe nrụzi ihe ọ bụla I nyere anyị, ma anyị nwere ike ihichapụ ma ọ bụ bibie otu ụdị Ihe Odide a n'oge ọ bụla.
Amachibidoro ntuziaka Onye ọrụ.
You na-akwado ma kwenye na, ka ị na-eji www.stylerave.com yana ọrụ dị iche iche, njirimara na arụmọrụ enyere na www.stylerave.com, ịgaghị eme (a) ime ka onye ọ bụla ma ọ bụ ihe ọ bụla ma ọ bụ gosipụta njikọ gị na ihe ọ bụla ọzọ. mmadu ma obu ndi ozo; (b) itinye mgbasa ozi nke aka gị ma ọ bụ nke atọ, akara ma ọ bụ ọdịnaya ndị ọzọ na ọdịnaya nke ihe ntanetị, ihe ma ọ bụ ọrụ (dịka ọmụmaatụ na enweghị mmachi, na vidiyo agbakwunyere (dị ka akọwara ebe a), ndepụta RSS ma ọ bụ Podcast nwetara site n'aka anyị ma ọ bụ site na www.stylerave.com), ma ọ bụ, belụsọ na enyere ikike na Usoro ndị a ma ọ bụ na www.stylerave.com, wepụta, depụtaghachi ma ọ bụ jiri ụdị ọdịnaya ma ọ bụ ọrụ ndị ọzọ maka ebumnuche azụmahịa ma ọ bụ nkwalite ọ bụla; ma ọ bụ (c) ịnwa ịnweta ohere na-enweghị ikike na sistemụ kọmputa ndị ọzọ site na www.stylerave.com. Furthernwekwukwa na ị gaghị anwa anwa (ma ọ bụ kwado ma ọ bụ kwado onye ọ bụla ọzọ) ịgagharị, tụgharịa injinia, gbanwee, ma ọ bụ gbanwee ma ọ bụ gbochie www.stylerave.com ma ọ bụ ọrụ weebụsaịtị, ma ọ bụ ọdịnaya ọ bụla na ya, ma ọ bụ mee ihe ọ bụla na-akwadoghị. were ya. Agree kwenyere na ịgaghị iji www.stylerave.com n'ụzọ ọ bụla nke nwere ike igbochi ojiji ndị ọzọ na ojiji nke www.stylerave.com ma ọ bụ ọrụ ya ọ bụla. Gaghị enweta ma ọ bụ nwaa inweta ihe ọ bụla ma ọ bụ ozi site n'ụzọ ọ bụla na - emeghị ka ịgaghị n'ihu ọha ma ọ bụ enyere maka ya site na www.stylerave.com.
Anyị nwere ike, site n'oge ruo n'oge, na-eme ọrụ izi ozi, ọrụ nkata, bọọdụ ngbasa ozi, bọọdụ ozi, blọọgụ, nzukọ ndị ọzọ na ụdị ọrụ ndị ọzọ dị na ma ọ bụ na www.stylerave.com. Na mgbakwunye na iwu ma ọ bụ ụkpụrụ ndị ọzọ anyị nwere ike biputere na metụtara otu ọrụ, ị kwenyere na ị gaghị bulite, zipu, bufee, kesaa ma ọ bụ bipụta na www.stylerave.com ma ọ bụ ọrụ ọ bụla ma ọ bụ njirimara ọ bụla emere ka ọ dị ma ọ bụ site na www.stylerave.com, ihe ọ bụla nke (i) igbochi ma ọ bụ gbochie onye ọrụ ọ bụla ọzọ iji ma nwee ọ andụ na www.stylerave.com ma ọ bụ ọrụ webụsaịtị ahụ, (ii) bụ wayo, iwu akwadoghị, iyi egwu, mkparị, iyi egwu, enweghị enyemaka, izu ike , okwu rụrụ arụ, okwu rụrụ arụ, mkparị, ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ, rụrụ arụ, ihe a na-egosi mmekọahụ ma ọ bụ na-adịghị mma, (iii) mebere ma ọ bụ gbaa agwa ga-abụ ịda iwu mpụ, na-ebilite iwu obodo ma ọ bụ na-emebi iwu obodo, steeti, mba ma ọ bụ nke ụwa, (iv) ) imebi, nwebigharị ma ọ bụ mebie ikike nke ndị ọzọ gụnyere, na-enweghị mmachi, nwebisiinka, ụghalaahịa, nzuzo azụmahịa, nzuzo, nkwekọrịta, ikike, ihe nzuzo na nzuzo ma ọ bụ ikike ọ bụla ọzọ, (v) co. nweta nje, spyware, ma ọ bụ ihe ndị ọzọ na-emerụ ahụ, (vi) nwere njikọ agbakwunyere, mgbasa ozi, akwụkwọ ozi n'ụdị ma ọ bụ atụmatụ pyramid ụdị ọ bụla, ma ọ bụ (vii) mejupụtara ma ọ bụ nwee ihe ngosi ma ọ bụ na-eduhie eduhie nke mbilite, nkwado ma ọ bụ nkwupụta nke eziokwu. Furthernwere n'ihu ikwenye ịghara izobe mmadụ ọ bụla ma ọ bụ ihe ọzọ, ma ọ bụ na - echeghị eche, gụnyere anyị ma ọ bụ ndị ọrụ anyị. Gị naanị gị na-ahụ maka ọdịnaya na nsonaazụ nke ọrụ gị ọ bụla.
Ikike Nyocha na Njikwa Nhazi.
Anyị na-edobe ikike, mana anyị enweghị ọrụ, inyocha na / ma ọ bụ nyochaa ihe niile edepụtara na www.stylerave.com ma ọ bụ site na ọrụ ma ọ bụ njirimara nke mkpokọta nke ndị ọrụ, anyị ejighi ụgwọ maka ụdị ihe ọ bụla nke ndị ọrụ bipụtara. Agbanyeghị, anyị na-edobe ikike n'oge niile iji kpughee ozi ọ bụla dịka ọ dị mkpa iji mejupụta iwu, iwu ma ọ bụ arịrịọ gọọmentị, ma ọ bụ dezie, jụ itinye ma ọ bụ wepu ozi ma ọ bụ ihe ọ bụla, n'ozuzu ma ọ bụ akụkụ, nke ahụ naanị anyị Ezi uche dị na ya ma ọ bụ mebie Usoro Iwu a, amụma anyị ma ọ bụ iwu dị. Anyị nwekwara ike ịnye mmachi na ụfọdụ njirimara nke nzukọ a ma ọ bụ machibido ohere ị nwere na akụkụ ma ọ bụ ntaramahụhụ niile na-enweghị ntaramahụhụ ma ọ bụ ntaramahụhụ ma ọ bụrụ na anyị kwenyere na ị na-emebi ụkpụrụ nduzi edepụtara na paragraf a, usoro anyị na ọnọdụ anyị ma ọ bụ iwu dị, ma ọ bụ maka ihe ọ bụla ọzọ na-enweghị ọkwa ma ọ bụ ibu ọrụ.
Ozi nkeonwe ma ọ bụ nke nwute.
Ọ dị mkpa icheta na e nwere ike idekọ ma chekwaa ihe ndị e kwuru n’otu ebe ma chekwaa ya n’ọtụtụ ebe, ma na websaịtị anyị ma n’ebe ndị ọzọ na Internetntanetị, nke nwere ike ịbịaru gị ogologo oge ma ị nweghịkwa ikike ịchịkwa onye ga-agụ ya. ha emecha. Ọ dị mkpa na ị ga-akpachara anya ma na-ahọta gbasara ozi nke ị na-ekpughe banyere onwe gị na ndị ọzọ, na nke ka nke, ịgaghị ekpughere ozi nzuzo, nke na-eme ihere, ma ọ bụ nke nzuzo ma ọ bụ ozi nzuzo gị n'ihe ị na-ekwu maka nnọkọ ihu ọha anyị.
Na-ejikọ ọnụ na www.stylerave.com.
Stylerave.com nwere ike jikọtara ya na saịtị ndị ọzọ na-anaghị elekọta, ma ọ bụ metụtara ya, Style Rave n'ihe ize ndụ gị. Enweta njikọ chiri anya na saịtị ndị a dị ka ọrụ nye ndị ọrụ ma ọ bụ nkwado ya ma ọ bụ jikọtara ya na saịtị a ma ọ bụ Style Rave. Style Rave abụghị maka ọdịnaya nke saịtị ndị ahụ ma ọ kwadoghị ha. A ga-enweta njikọ njikọ Hyper na ihe ize ndụ nke onye ọrụ ya, na Style Rave na-enweghị ihe nnọchi anya ma ọ bụ nkwa maka ọdịnaya ma ọ bụ eziokwu nke njikọ hyper a ma ọ bụ saịtị ndị ọzọ nwere njikọ www.stylerave.com.
Iwu maka Ngwaahịa na Ọrụ.
Anyị nwere ike ịme ụfọdụ ngwaahịa maka ndị ọbịa na ndị na-edebanye aha nke www.stylerave.com. Ọ bụrụ n’iwu ịtụ ngwaahịa ọ bụla, ị ga - egosipụta ya ma nye ikike na ị gbara afọ 18 ma ọ bụ karịa. Agree kwenyere ịkwụ ụgwọ ọnụahịa zuru oke maka ịzụta ihe ọ bụla ị jiri site na kredit / debit kaadị kwekọrọ n'usoro ịntanetị gị ma ọ bụ site na ụgwọ ndị ọzọ nabatara anyị. Agree kwenyere ịkwụ ụtụ isi niile enyere aka. Ọ bụrụ na anyị enwetaghị ụgwọ site n'aka onye na-eweta kaadị akwụmụgwọ gị ma ọ bụ nke na-eweta debit ma ọ bụ ndị nnọchi anya ya, ị kwụrụ ịkwụ ụgwọ niile ruru ka anyị si chọọ. Productsfọdụ ngwaahịa ị zụtara na / ma ọ bụ budata na www.stylerave.com nwere ike ịdabere na usoro na ọnọdụ enyere gị oge enyere n'ịzụta ma ọ bụ nbudata ndị a.
Saịtị Weebụ Nke atọ.
May nwere ike ijikọ site na www.stylerave.com na saịtị weebụ ndị ọzọ na saịtị weebụ ndị ọzọ nwere ike jikọta www.stylerave.com ("njikọ saịtị"). Acknowledge kwenyere ma kwenye na anyị agaghị ebu iwu maka ozi a, ọdịnaya, ngwaahịa, ọrụ, mgbasa ozi, koodu ma ọ bụ ihe ndị ọzọ nke ma ọ bụ site na saịtị Njikọ ndị a ga-enye ma ọ bụ ghara ịnwe ya, ọbụlagodi ma ọ bụ ndị mmekọ nke anyị. Njikọ njikọ saịtị njikọ adịghị egosi na nnabata ma ọ bụ nkwado sitere na ebe nrụọrụ weebụ ndị dị otú ahụ ma ọ bụ ozi, ọdịnaya, ngwaahịa, ọrụ, mgbasa ozi, koodu ma ọ bụ ihe ndị ọzọ ewepụtara na ma ọ bụ na saịtị weebụ ndị dị otú ahụ. Ntinye nke njikọ ọ bụla na saịtị ndị dị na saịtị anyị apụtaghị na nkwenye anyị, nkwado ma ọ bụ nkwanye saịtị ahụ. Style Rave na-egosipụta ibu ọ bụla maka njikọ (1) na saịtị ọzọ na saịtị a yana (2) na saịtị Weebụsaịtị a. Style Rave enweghị ike ịmebe ụkpụrụ nke weebụsaịtị ọ bụla nke enyere njikọ aka na sava weebụ a, anyị agaghịkwa enwe ọrụ maka ọdịnaya nke saịtị ndị dị otú ahụ, ma ọ bụ njikọ ọzọ na-esote. Anyị anaghị anọchi anya ma ọ bụ nye ikike na ọdịnaya nke saịtị weebụ ọ bụla ziri ezi, agbasoro iwu steeti ma ọ bụ nke gọọmentị, ma ọ bụ kwenye na nwebisiinka ma ọ bụ iwu ikike ọgụgụ isi ọzọ. Ọzọkwa, anyị abụghị ndị ọrụ maka ma ọ bụ ụdị mgbasa ozi ọ bụla nke webatara websaịtị ọ bụla jikọrọ. Ancedabere na ọdịnaya nke saịtị weebụ nke atọ na-eme ihe dịịrị gị ma ị na-ewere ọrụ na nsonaazụ ọ bụla na-esite na ụdị ịdabere.
Njikọ Video Njikọ.
Pagesfọdụ peeji nke www.stylerave.com na-enye arụmọrụ gị ka ị “gosipụta” vidiyo na-egosi na ibe a na saịtị weebụ ma ọ bụ ibe blọọgụ (ya na onye ọkpụkpọ ahụ, dị ka akọwara ebe a, “Video agbakwunyere”). A na-enye arụmọrụ a site na ịnye gị HTML dị mkpa iji tinye na ibe dị otú ahụ iji mee ka Vidiyo agbakwunyere. Ọ bụrụ na i tinye HTML na ibe weebụ ma ọ bụ na ntanetị, ihe ga - eme ka nnabata vidiyo ahụ maka Ihe Nlegharị Anya si na sava anyị mana enwere ike inyefe ndị ọbịa nke ibe ahụ ka ọ bụrụ akụkụ nke ibe ahụ. Ọ bụrụ n ’ịhọrọ itinye video na ibe, ị ga - ekwenye dị ka ndị a: (i) ị gaghị agbanwe, n’akụkụ ọ bụla, Agbakwunyere vidiyo (gụnyere na-enweghị mmachi ọdịnaya, usoro, na ogologo ya na mgbasa ozi metụtara ya) site na otu esi eme ya. jere ozi site na sava anyị; (ii) willgaghị eme ka ohere banye na Ihe Mgbakwunye Video site na ihe ọkpụkpọ vidiyo ọ bụla ma ọ bụ ngwaọrụ ọzọ na-abụghị ihe ọkpụkpọ vidiyo anyị na-enye mgbe vidiyo agbakwunyere (ihe “Ihe ọkpụkpọ”); (iii) Enwere ike iji vidiyo agbakwunyere dị ka akụkụ maka ebumnuche azụmahịa, gụnyere na peeji nke na-akwado mgbasa ozi, ọ bụrụhaala na: (a) Agunyeghi vidiyo agbakwunyere na, ma ọ bụ jiri dị ka akụkụ nke ọrụ na-ere ohere ịnweta ọdịnaya vidiyo; (b) etinyela mgbasa ozi, nkwado ma ọ bụ ozi nkwalite na, ma ọ bụ n'akụkụ ya ozugbo, vidiyo ma ọ bụ ihe ọkpụkpọ agbakwunyere; na (c) ruo n’ere ịre mgbasa ozi ọ bụla, nkwado ma ọ bụ ihe nkwalite iji gosipụta n’otu peeji nke gụnyere Video Ihe Ntinye, peeji ahụ gụnyere ọdịnaya ndị ọzọ enyere anyị, nke bụ ezigbo ihe ndabere maka ụdịrị ire a. Maynwere ike igbochi, gbochie, wulite ma ọ bụ gbanyụọ akụkụ ọ bụla nke ihe ọkpụkpọ ahụ, gụnyere na-enweghị njikọ mmachi na saịtị anyị. Understand ghọtara ma kwenye na usoro ihe omimi niile metụtara na ịnweta na ikiri vidio ahụ agbakwunyere ga-ekenye gị na www.stylerave.com na-enweghị mmachi ọ bụla nke Usoro Ojiji ndị a, anyị agaghị enwe ike ịkwụ gị ụgwọ maka ebumnuche ọ bụla na nsọpụrụ. ị na-eji Video agbakwunyere ma kwenye iji chebe, kwupụta ma jide anyị na ndị ọrụ anyị na ndị isi nke ndị mmekọ anyị, ndị isi ọrụ, ndị ọrụ na ndị ọrụ na-enweghị nsogbu na ebubo niile, ụgwọ, ụgwọ na mmefu, gụnyere ego ndị ọka iwu, na-ebili na ụzọ ọ bụla site na iji Video agbakwunyere.
Onye nnọchi anya ya.
Anyị na-akwanyere ikike ọgụgụ isi nke ndị ọzọ ùgwù, ma na-achọ ka ndị mmadụ na-eji www.stylerave.com, ma ọ bụ ọrụ ma ọ bụ atụmatụ emere ka ọ dị na www.stylerave.com, mee otu ihe ahụ. Ọ bụrụ na i kwenyere na edepụtaghachila ọrụ gị nke mere ịda iwu nwebisiinka, biko ziga ozi ndị a site n'aka onye nwebisiinka nke edepụtara, dị ka usoro nke Millennium Digital rights, 17 USC § 512 (c) (2), aha ya. n'okpuru:
a. Adreesị gị, nọmba ekwentị, na adresị email;
b. Nkọwa nke ọrụ nwebisiinka ị kwuru na agbagidela;
c. Nkọwa nke ebe ebubo ebubo ịda iwu;
d. Nkwupụta sitere na gị na ịnwere ezigbo okwukwe kwenyere na ojiji agbaghaghị nwe nwebisiinka, ndị nnọchite ya, ma ọ bụ iwu;
e. Mpempe akwụkwọ electronic ma ọ bụ nke anụ ahụ nke onye ahụ nyere ikike ịmechitere onye nwe nwe mmasị nwebiisinka; na
f. Nkwupụta sitere n'aka gị nke ịkwụ ụgwọ ntaramahụhụ mmehie, na ozi ndị dị n'elu na ọkwa gị ziri ezi yana ị nwebisiinka nwebisiinka ma ọ bụ nwere ikike ịme ihe maka onye nwe nwebisiinka.
IHE KPỌTARA NIILE KA EGO
Onye nnọchi anya nwebisiinka:
Radị Rave. Email: ọdịnaya@www.stylerave.com
Akwụsịghị akwụkwọ ikike.
Stylerave.com, gụnyere, na-enweghị njedebe, ọrụ niile, njirimara, ọdịnaya, ọrụ na ngwaọrụ enyere site na www.stylerave.com, ka enyere dịka "ọ dị ugbu a," "dị ka ọ dị," na-enweghị akwụkwọ ikike n'ụdị ọ bụla, na-egosipụta ma ọ bụ na-egosi gụnyere, na-enweghị njedebe, ikike ọ bụla maka ozi, data, ọrụ nhazi data, oge ma ọ bụ ohere na-enweghị nsogbu, akwụkwọ ikike ọ bụla gbasara ịdị, ikike, izu oke, izu oke, izu oke, uru, ma ọ bụ ọdịnaya nke ozi, na nkwa ọ bụla nke Ududo, enweghị mmerụ, ire ahịa ma ọ bụ ahụike maka otu ebumnuche, anyị ji otu anyị wepu ikike na ihe niile edeturu ma gosipụta. Anyị anaghị enye ikike na www.stylerave.com ma ọ bụ ọrụ ahụ, ọdịnaya, ọrụ ma ọ bụ ihe enyere site na www.stylerave.com ga-adị n'oge, echedoro, na-enweghị nkwụsị ma ọ bụ na-enweghị njehie, ma ọ bụ na a ga-emezi mmezi ahụ. Anyị enweghị nkwa ọ bụla na www.stylerave.com ma ọ bụ ọrụ enyere ga-emezu ihe ndị ọrụ chọrọ. Enweghị ndụmọdụ, nsonaazụ ma ọ bụ ozi, ma ọ bụ nke edere ede ma ọ bụ nke edepụtara, nke ị nwetara n'aka anyị ma ọ bụ site na www.stylerave.com ga-emepụta akwụkwọ ikike ọ bụla akọwapụtaghị ya ebe a. Anyị na ndị mmekọ anyị ewepụtaghị ọrụ ọ bụla, na ọgaghị akpata ụgwọ, ọghọm ndị ọ bụla, ma ọ bụ nje nwere ike ibunye, akụrụngwa gị na ịnweta gị, iji, ma ọ bụ mee nchọgharị na www.stylerave.com ma ọ bụ nbudata gị ihe ọ bụla, data, ederede, onyonyo, ọdịnaya vidiyo, ma ọ bụ ọdịnaya sitere na www.stylerave.com. Ọ bụrụ na enweghị afọ ojuju na www.stylerave.com, nanị ihe ga-agwọta ya bụ ịkwụsị iji www.stylerave.com.
Anyị na-anwa ịgba mbọ hụ na ozi edepụtara na www.stylerave.com bụ nke ziri ezi ma na -akọ ọhụụ. Anyị na-edobe ikike ịgbanwe ma ọ bụ mee mgbazi na ozi ọ bụla enyere na www.stylerave.com n'oge ọ bụla na enweghị ịdọ aka ná ntị ọ bụla. Anyị anaghị akwado ma ọ bụ na-eme ihe maka izi ezi ma ọ bụ ntụkwasị obi nke echiche ọ bụla, ndụmọdụ ma ọ bụ nkwupụta na www.stylerave.com, ma ọ bụ maka mkpesa ọ bụla, okwu mkparị, okwu rụrụ arụ, nke na-adịghị mma, na-akwadoghị iwu ma ọ bụ na-emebi iwu nke onye ọ bụla ọzọ karịa ndị na-ekwuchitere ndị ọrụ anyị ikike. ka ị na-eme ike ọchịchị ha (gụnyere, na-enweghị mmachi, ndị ọrụ ndị ọzọ nke www.stylerave.com). Ọ bụ ọrụ gị ịtụle izi ezi, izu oke ma ọ bụ uru nke ozi ọ bụla, echiche, ndụmọdụ ma ọ bụ ọdịnaya ndị ọzọ dị na www.stylerave.com. Biko chọọ ndụmọdụ nke ndị ọkachamara, dị ka o kwesịrị, gbasara nyocha nke ozi a kapịrị ọnụ, echiche, ndụmọdụ ma ọ bụ ọdịnaya ọ bụla, gụnyere ma ọnweghị oke na ego, ahụike, ma ọ bụ ozi ndụ, echiche, ndụmọdụ ma ọ bụ ọdịnaya ndị ọzọ.
Enweghị mmachi nke ihe dị n’elu nkebi a, anyị na ndị mmekọ anyị, ndị na-eweta ngwaahịa na ndị na-enye ikike anaghị enwe nkwa ọ bụla ma ọ bụ ihe nnọchi anya gbasara ngwaahịa ọ bụla ma ọ bụ ọrụ enyere n'iwu ma ọ bụ enyere na www.stylerave.com, na nke a wee kọpu, ma ị na-agbagha, na ikike niile yana nnọchi anya nke emere na akwukwo ma obu aka oru, ajuju ajuju ajuju a na uzo ozo na www.stylerave.com ma obu na mmekorita anyi ma obu ndi nnochite anyi. Anyị na-enye ngwaahịa na ọrụ ọ bụla enyere n'iwu ma ọ bụ nyere site na www.stylerave.com "dị ka ọ dị," belụsọ na oke, ma ọ bụrụhaala, edepụtara na akwụkwọ ikike ma ọ bụ nkwekọrịta ọ bụla nke edepụtara n'etiti gị na anyị ma ọ bụ onye nyere anyị ikike ma ọ bụ onye na-eweta ya.
Na mmemme ọ bụla, gụnyere mana ọnweghị mmachi, ka anyị, ndị mmekọ anyị, ma ọ bụ ihe ọ bụla nke onye nduzi anyị, ndị ọrụ anyị, ndị ọrụ anyị, ndị na-ahụ maka ọdịnaya ma ọ bụ ndị na-enye ọrụ anyị (na mkpokọta, "ihe ndị echekwara") ga-akwụ ụgwọ maka ndị na-eduzi onwe ha, n'ụzọ na-apụtaghị ìhè. ihe puru iche, ihe ndaputa, ihe nlere, ihe nlere ma obu mmebi nke sitere na, ma obu nke metụtara, site na, ojiji, ma obu enweghi ike iji, www.stylerave.com ma obu ọdịnaya, njiri mara, akụrụngwa na ọrụ ndị metụtara ya, onyinye gị ozi sitere na www.stylerave.com, azụmaahịa furu efu ma ọ bụ ahịa furu efu, ọbụlagodi na a dọrọ ndị dị otú ahụ echedoro maka ohere nke ụdị emebi a. Na mmemme ọ bụla a ga-enwe ike ị nweta ihe echedoro ma ọ bụ metụtara ọdịnaya ọ bụla edepụtara, nyefee, gbanwere ma ọ bụ nata site na onye ọrụ ọ bụla ma ọ bụ onye ọzọ na www.stylerave.com. Ọnọdụ agaghị enwe ngụkọta ngụkọta nke ndị echekwabara echekwadoro maka mmebi, mfu na ihe na-akpata (ma ọ bụ na nkwekọrịta ma ọ bụ mmekpa ahụ gụnyere, mana anaghị ejedebe na, akpachapụghị anya ma ọ bụ na ọ bụghị) ibilite na usoro na ọnọdụ ma ọ bụ nke gị. Ojiji nke www.stylerave.com gafere, na mkpokọta, ọnụ ahịa ahụ, ọ bụrụ na enwere, kwụrụ ụgwọ n'aka gị maka ojiji nke www.stylerave.com ma ọ bụ zụta ngwaahịa site na www.stylerave.com.
Seizures na-ese foto.
Onu pere mpe n'ime ndị mmadụ nwere ike ịnwe nhịahụ mgbe ekpughere ha ụfọdụ ihe onyonyo anya, dị ka ọkụ na-enwu enwu ma ọ bụ ụkpụrụ nwere ike ịpụta na egwuregwu vidiyo ma ọ bụ ọdịnaya elektrọn ma ọ bụ ihe ntanetị. Ọbụlagodi ndị na-enweghị akụkọ ọdịnala ma ọ bụ Akwụkwụ na-adọ nwere ike ịnwe ọnọdụ amaghị nke nwere ike ibute 'ihe ọdịdọ a na-eche n'echiche' mgbe ha na-ekiri egwuregwu vidiyo ma ọ bụ ọdịnaya elektrọnik ndị ọzọ. Ihe ọdịdọ ndị a nwere ụdị mgbaàmà dị iche iche, gụnyere ọdịdị ihu, diskilanti, ọgba aghara, ịmara banyere oge, anya ma ọ bụ ihu ihu, mgbanwe ọhụụ ma ọ bụ ịma jijiji ma ọ bụ ịma jijiji nke aka ma ọ bụ ụkwụ. Ọ bụrụ na inwee otu n'ime mgbaàmà ndị a dị na mbụ, ma ọ bụ ọ bụrụ na gị ma ọ bụ ezinaụlọ gị nwere akụkọ ọdịnala ma ọ bụ Akwụkwụ na-adọ, ị ga-akwụsị ozugbo iji www.stylerave.com ma gakwuru dọkịta.
Iwu Ndị ọdabara.
Anyị na-achịkwa ma na-arụ ọrụ www.stylerave.com site na ụlọ ọrụ anyị dị na United States of America. Anyị anaghị anọchi anya na ihe ndị dị na www.stylerave.com kwesịrị ma ọ bụ dịrị maka iji rụọ ọrụ na ọnọdụ ndị ọzọ. Ndị họọrọ ịnweta www.stylerave.com site na ọnọdụ ndị ọzọ na-eme nke a n'onwe ha, ha na-ahụ maka irube isi n'iwu obodo, ma ọ bụrụ na etinyere etu iwu obodo siri dị. Ndị niile na usoro ndị a na-ahapụ ikike nke ha na nke ndị juri.
Anyị nwere ike kwụsị, gbanwee, kwụsịtụ ma ọ bụ kwụsịtụ akụkụ ọ bụla nke www.stylerave.com ma ọ bụ ọrụ webụsaịtị n'oge ọ bụla. Anyị nwere ike igbochi, kwụsịtụ ma ọ bụ kwụsị ịnweta gị na www.stylerave.com yana / ma ọ bụ ọrụ ya ọ bụrụ na anyị kwenyere na ị na-emebi iwu anyị na ọnọdụ anyị ma ọ bụ iwu etinyere, ma ọ bụ maka ihe ọ bụla ọzọ na-enweghị amamọkwa ma ọ bụ ụgwọ. Anyị na-ejikwa iwu nke na-eweta njedebe maka ọnọdụ kwesịrị ekwesị nke www.stylerave.com na-eji ikike nke ndị ọrụ na-emeghachi ihe na-emebi ikike ikike ọgụgụ isi.
Mgbanwe na Usoro eji.
Style Rave na-echekwa ikike, na aka anyị, ịgbanwe, gbanwee, gbakwunye ma ọ bụ wepu akụkụ ọ bụla nke Usoro na Ọnọdụ, n'ozuzu ma ọ bụ akụkụ, n'oge ọ bụla. Mgbanwe na Usoro na Ọnọdụ ga-adị irè mgbe edepụtara ya. Continuedga n'ihu www.stylerave.com yana / ma ọ bụ ọrụ emere na ma ọ bụ na www.stylerave.com mgbe agbanwere mgbanwe ọ bụla na Usoro na Ọnọdụ ga-ahụta ịnabata mgbanwe ndị ahụ.
Ihe dịgasị iche.
Usoro na ọnọdụ, yana mmekọrịta gị na gị, ga-achịkwa iwu nke Steeti New York, United States of America. I kwenyere na ihe ọ bụla ga-ebilite n’usoro usoro iwu ga-amalite ma nụrụ ya n’ụlọ ikpe kwesịrị ekwesị na steeti New York, Mpaghara Nassau, United States of America. I kwenyere n'inye mkpebi nke onwe na ikike pụrụ iche nke ụlọ ikpe dị n'etiti Nassau County na Steeti New York. Mwepu aka anyị iji gosipụta ikike ma ọ bụ itinye ikike ọ bụla ma ọ bụ usoro nke Usoro na Ọnọdụ agaghị emejupụta ikike na ikike dị otú a. Ọ bụrụ na ndenye ọ bụla nke Usoro na ọnọdụ ndị ụlọ ikpe nwere ikike inwe adịghị adị, ndị otu a kwekọrịtara na ụlọ ikpe kwesịrị ịgbalịsi ike inye ebumnuche ndị ọzọ dị ka e gosipụtara na ndokwa ahụ, yana usoro ndị ọzọ nke Usoro na onodu dichagide n'ike.